First Myanmar-New Zealand Foreign Office Consultations held in Nay Pyi Taw – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
First Myanmar-New Zealand Foreign Office Consultations held in Nay Pyi Taw
The first Myanmar-New Zealand Foreign Office Consultations was held on7February 2019 at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw. The meeting was co-chaired by U Myint Thu, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Myanmar and H.E. Mr. Ben King, Deputy Secretary, Asia and Americas Group of the Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand.
During the meeting, they discussed matters pertaining to the promotion of bilateral relations and cooperation, Foreign Policy settings and priorities as well as security and stability in the region. They also deliberated on Myanmar-New Zealand Joint Commitment for Development (JCfD) and its priority areas such as agriculture, renewable energy, knowledge and skills and disaster risk management, and potential new areas of cooperation. Permanent Secretary also briefed on the Government’s priorities and ongoing efforts for peace and national reconciliation, recent developments in Rakhine State and transnational crimes and counter narcotic efforts. They also exchanged views on regional and international issues, including ASEAN regional architecture and Indo-Pacific geopolitics.
Permanent Secretary U Myint Thu hosted the working lunch for the New Zealand Delegation led by H.E. Mr. Ben King, Deputy Secretary, Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand at M-Gallery Hotel in Nay Pyi Taw.
မြန်မာ-နယူးဇီလန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ပထမအကြိမ် မူဝါဒရေးရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ နေပြည်တော်တွင် လက်ခံကျင်းပ
(၇-၂-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား ပထမအကြိမ် မူဝါဒရေးရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်၌ ၇-၂-၂၀၁၉ ရက်က ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူနှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှနှင့် အမေရိကဒေသဆိုင်ရာ လက်ထောက်ဝန်ကြီး H.E. Mr. Ben King တို့က ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနှင့် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကဏ္ဍများ၊ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေး ကဏ္ဍများကို အလေးထား ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာ-နယူးဇီလန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ပူးတွဲကတိကဝတ်ပြုမှု သဘောတူညီချက် (၂၀၁၇-၂၀၂၁) ပါ အဓိကကဏ္ဍများ ဖြစ်သည့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၊ အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ထိန်းချုပ်ရေးတို့တွင် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်သွားရန်နှင့် အနာဂာတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည့် ကဏ္ဍများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကဏ္ဍများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် မှုခင်းများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးတို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ကိစ္စရပ်များ၊ အာဆီယံ ဒေသဆိုင်ရာ အဆောက်အဦနှင့် အင်ဒို-ပစိဖိတ် အဆိုပြုချက်တို့ကိုလည်း အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူသည် နယူးဇီလန် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှနှင့် အမေရိကဒေသဆိုင်ရာ လက်ထောက်ဝန်ကြီး H.E. Mr. Ben King နှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား M-Gallery ဟိုတယ်၌ အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။